१० हजार मरेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न पाउने तर, रेशम चौधरीलाई आजीवन कारावास हुने ? – Kantipur Press
कैलाली जिल्ला अदालतले सांसद रेशम चौधरीलगायतलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको विरोधमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । यससँगै राजपा नेताका कडा प्रतिक्रिया पनि आउन थालेका छन् । अब फेरि आन्दोलन पो हुने हो कि ? फेरि नेपाली जनताले अर्को नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्ने पो हो कि ? जस्ता आशंका पनि बढेका छन् । यस विषयमा राजपा नेपालको योजना के छ ? यीसहित अन्य समसामायिक विषयमा पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोसँग राजधानीका सुजीतकुमार झाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अब आन्दोलन नै गर्नुहुन्छ त ?
आन्दोलनको विकल्प छैन । हामी कडा संघर्षतर्फ फेरि अघि बढ्छाैं। यत्रो गर्दा पनि मधेसीले अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । १० हजार नेपाली मरेपछि पनि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न पाउने तर रेशम चौधरीलाई आजीवन कारावास हुने । त्यसैले, एउटा देशमा दुईवटा कानुन चल्दैन ।
फेरि नेपाली जनताले आन्दोलन बेहोर्नुपर्ने हो ?
आन्दोलन रहर होइन, यो बाध्यता हो । जनताले न्याय पाउँदैनन् भने त्यो बेला संगठित भएर सडकमा आउनुको अर्को विकल्प केही हुँदैन । यो सत्यलाई सबैले बुझिरहेका छन् । २०४६÷४७ सालपछि नेपालमा धेरै आन्दोलन भए । अन्याय अत्यचारविरुद्ध धेरैले आवाज उठाए । पहिचानका लागि पनि आन्दोलन भयो । गजेन्द्रनारायण सिंहको समयदेखि अहिलेसम्म हामीहरूले पनि कैयांै मधेस आन्दोलन गरिसकेका छौं तर आवश्यक सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन ।
मान्छे मारिरहोस् र राजनीतिका नाममा उसलाई माफी होस् । तपाईंहरूले त्यही चाहिरहनुभएको हो ?
कसले त्यसो भनेको छ ? हाम्रो कुरोलाई नेपाली मिडियाले जहिले पनि बंग्याउँछन् । हामी चाहन्छौं हिजोको दिनमा सशस्त्र युद्ध गरेर मान्छे मार्नेहरूलाई पहिले जेल हाल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि झापा आन्दोलनमा सहभागी भएकै हुन् । स्वर्गीय भइसक्नुभएका गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि दूधबाट धोएका थिएनन् । उनीहरूलाई कानुनले केही नगर्ने मधेसी थारू र पहाडका आदिवासी जनतालाई मात्रै प्रताडित गर्ने । अब डबल चरित्र चल्दैन । अरूले गर्दा क्रान्ति हुने अनि हामीले गर्दा अपराध ?
सरकारसँग समर्थन फिर्ता लिनेबितिकै देशमा हलचल हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निन्द्रा हराइसकेको छ । हामी कुरो गर्ने पार्टी होइन, हामीले आन्दोलन गरेर कैयौंपटक देखाइसकेका छौं । हाम्रा कैयौं वीर जवानको अधिकार आन्दोलनमा सहादत भएको छ ।
त्यसो भए अब नेपाली जनताले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्नेगरी आन्दोलन गर्नुहुन्छ, होइन ?
अब नाकाबन्दी भन्ने हुँदैन । नाकाबन्दीले शासकलाई कुनै नोक्सानी हुँदैन । राज्यका प्रतिनिधि सिंहदरबारमा मज्जाले ऐसआराम गरिरहन्छन् । समस्या हुन्छ, आमनेपाली जनतालाई । तीनगुणा बढी मूल्यमा ग्याँस किन्नुपर्छ, अन्य सबै समान महँगो हुने गर्छ । राज्यले सामान आपूर्तिसँग मतलब राख्दैन । यस्ता मतलबी सरकारको अघि यसप्रकारको आन्दोलनको औचित्य हुँदैन । जनतालाई दुःख दिने काम नाकाबन्दीले हुने गरेको छ । त्यसैले, हामी नाकाबन्दी गर्दैनौं ।
मधेस आन्दोलनका बेला नाकाबन्दी गरेर गल्ती भएको हो त ?
म त्यो भन्दिनँ । तर, सरकार नेपाली जनतालाई सुविधा दिन गम्भीर छैन, त्यो एक्सपोज गर्न हामी सफल भएको थियौं । जनतालाई सुविधा दिन नसक्ने सरकार निकम्मा थियो । यत्रो नेपाली जनताको सहादत भइरहेको थियो । तर, सिंहदरबारमा बस्नेलाई मतलब थिएन । यसप्रकारको नाकाबन्दी यसअघि पनि भएको थियो । २०६२÷६३ को आन्दोलनताका अन्य देशलाई नाकाबन्दी गर्न अह्वान गरिएको थियो ।
अब आन्दोलनलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
यसपालि फरक ढंगले आन्दोलन सुरु गर्छौं । यसपालिका आन्दोलनमा मधेसी मात्रै रहँदैनन् दबिएको पिछडिएको शोषित पीडित सबै जनता रहन्छन् । तराईका आदिवासी दलितसँग कुरो भइरहेको छ । पुरै नेपालमा आन्दोलन देखिनेछ । आन्दोलनको गृहकार्य अघि बढिसकेको छ ।
मधेसका लागि सरकारमा बसेर संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले के गरिरहनुभएको छ, सबैले मूल्यांकन गरिरहेकै छन् । उहाँ केपी ओलीको अंग हो । यो सरकारको अंग हो । यो सरकारले हाम्रो विरुद्धमा काम गरिरहेको छ । मधेसको मागलाई बेवास्ता गरिरहेको छ ।
मधेसी जनता आन्दोलनका लागि तयार नभएकाले राजपा आन्दोलनतर्फ अघि नबढेको भन्ने भनाइ छ नि ?
भन्नेहरूको मुखलाई कसैले रोक्न सक्दैन । तर, सरकारसँग समर्थन फिर्ता लिनेबितिकै देशमा हलचल हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निन्द्रा हराइसकेको छ । हामी कुरो गर्ने पार्टी होइन, हामीले आन्दोलन गरेर कैयौंपटक देखाइसकेका छौं । हाम्रा कैयौं वीर जवानको अधिकार आन्दोलनमा सहादत भएको छ । आन्दोलनका लागि पुरै तयारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ, पुरै तयारी भएर सडकमा आउँछौं । यसमा हामी सतर्क
पनि छौं ।
तपाईंहरूको आन्दोलनमा संघीय समाजवादी फोरम र उपेन्द्र यादव पनि रहनुहुन्छ त ?
यो कुरो उहाँलाई नै सोध्दा वेश हुन्छ । जसले सत्ताका लागि मलेठ घटना बिर्सिसकेका छन्, त्यस्तासँग अरू के अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उहाँलाई जसरी पनि पद चाहियो । आन्दोलनका बेला सबै मधेसवादी मिल्नुपर्छ भन्ने जनताको चाहना थियो । हामी ६ दल मिल्यौं तर उपेन्द्रजी मिल्नुभएन । मैले अस्ति सप्तरीको मलेठमा पनि भनेको थिएँ ।
आन्दोलनका नाममा खाली जनता मार्ने अनि जनताको सपना चाहिँ पूरा नगर्ने । यो कहाँसम्मको न्याय हो ? उपेन्द्रजीले अहिलेसम्म बुझ्न सकिरहनुभएको छैन । मैले उपेन्द्रजीलाई पटकपटक भनेको छु कि तपाईं भूल सुधार गर्नुस् । जनताका पक्षमा आउनुस् । जोसँग लड्नुपर्ने हो, त्यससँग मिलेर अघि बढ्न सुहाएन भनेका छौं ।
उपेन्द्र यादवले मधेस बिर्सिसकेका छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
उहाँको विषयमा उहाँलाई नै बढी थाहा होला । मधेसका लागि सरकारमा बसेर संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले के गरिरहनुभएको छ, सबैले मूल्यांकन गरिरहेकै छन् । उहाँ केपी ओलीको अंग हो । यो सरकारको अंग हो । यो सरकारले हाम्रो विरुद्धमा काम गरिरहेको छ । मधेसको मागलाई बेवास्ता गरिरहेको छ ।
सम्बन्धले रेशम चौधरीको शपथ भएको छैन । यो स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ । मेरो आग्रह र ममाथि कृपा गरेर यो शपथ भएको होइन । मैले संसद्मा लाइभ नै भनको थिएँ कि जुन कानुनले आनदोलनकारीलाई निर्वाचन लड्न छुट दिएको छ, जनतालाई सांसद बनाएको छ । यो लोकतन्त्र हो ।
प्रदेश २ मा तपाईंका मन्त्री घरमै बसेर मन्त्रालय चलाउँछन् । काम नगरेका कारण निकै बजेट फ्रिज हुने खतरा बढेको छ नि ?
प्रदेशको सरकारको कामकाजलाई लिएर अध्यक्षमण्डलको यसैसाता जनकपुरमा बैठक बसेको थियो । पार्टीका प्रतिनिधिहरू र सरकारमा सहभागी नेताहरू सबैले आआफ्ना सुझाब दिएका छन् । एक–दुई दिनभित्रै अध्यक्षमण्डलको बैठक हुनेछ । सरकारलाई गति दिन रणनीति बनाइनेछ । पार्टीको आन्तरिक कुरा हो । यसमा चिन्ता लिनुपर्ने केही देख्दिन ।
प्रदेश सरकारको कामकाज तपाईंको पार्टीको त होइन नि ?
हाम्रो सरकार हो । हामीले विकासको गति दिन चाँडै रणनीति बनाइरहेका छौं । हामीले आन्तरिक कुरो सुधार गरेर जानुपर्छ । तर, मुख्य समस्या त्यो होइन, संघले अवरोध गरिरहेको छ । केपी ओलीजीले अवरोध गरिरहनुभएको छ । केन्द्रले अहिलेसम्म कर्मचारी दिएको छैन । सीमित कर्मचारीको भरमा प्रदेश चलाउनुपरेको छ । संघीयतालाई असफल बनाउने प्रयास हुँदै छ । केपी ओली कहिल्यै पनि संघीयताको पक्षधर होइनन् । हामीले संघको विकल्प खोजेका हौं र आफ्नो सरकार खोजेका हौं । तर, त्यो हुन दिइरहेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग तपाईंको धेरै राम्रो सम्बन्ध भएका कारण सांसद रेशम चौधरीको शपथग्रहण गराउनुभयो भनिन्छ नि ?